Ogaden News Agency (ONA) – Hawlgalo si gaar ah meela kala duwan loola beegsaday saraakiisha sirdoonka cadawga
Hawlgalo si gaar ah meela kala duwan loola beegsaday saraakiisha sirdoonka cadawga
Saraakiil sirdoonka cadawga ka tirsan oo ah kuwa sida gaarka ah looga soo xulo Wayaanaha ayay meela kala duwan naftood-hurayaasha CWXO ku fuliyeen dil qorshaysan. Saraakiishan la khaarijiyay ayaa qaarkood in mudda ah la daba socday iyagoo dhibaatooyin badan u gaystay dadka shacabka ah. Hawlgaladaa iyo qaar kaloo naga soo gaadhay Xarunta dhexe ayaa sidan u kala dhacay;
– 27-12-2011 Gudda oo ka tirsan Dhagaxle oo ah G.Jigjiga hawlgal gaar ahaa oo CWXO ay fuliyeen waxaa lagu dilay sarkaal Woyane ah oo ka tirsaa ciimada sahanka cadawga.
– 29-12-2011 Jiriiqati oo ka tirsan Banbaas waxaa hwalgal gaar ah lagu fuliyay sarkaal ka tirsanaa Sirdoonka cadawga oo muddo dheer lagu daba joogay.
– 26-12-2011 Heedaan oo ka tirsan Gorey hawlgal gaar ahaa oo lagu fuliyay Sirdoonka cadawga ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa Sahanka cadawga
– 21-12-2011 waxaa dagaal mir ah oo lagu qaday saldhiga dadawga ee Galaalshe waxaana loogu gaystay halkaa khasaare culus oo aan faahfaahin buuxda laga haynin
– 01-2012 Weerar qorsheysan oo lagu fuliyay Saldhiga Galaalshe ee cadawga ayaa lagu dilay 4 askari tiro kalana lagu dhawacay islamrkaana loo gaysatay burbur qalab iyo hanti kala duwan oo cadawgu lahaa.
– 4-01-2012 dagal gaadmo ah oo lagu fuliyay cadawga Horohawd waxaa lagaga dilay 1 askari 2 kalana waa laga dhaawacay.
– 5-01-2012 dagal labaad oo gaadmo oo lagu fuliyay ciidanka cadawga oo ku sugnaa Horohawd aya loogu gayste khasare dhimasho iyo dhawac leh oo aan wali la soo tiro koobin.
3-01-2012 Gaadhi shacab ah oo oo marayay Dundumocad ayay Woyaanuhu raraas oodda kaga qadeen. Waxay dhaawacyo halis ah ka soo gaadheen sadex ruux oo ka mid ahaa safarka, ka dibna waxay boob iyo jidh dil u gaysteen rakaabki saarnaa gaadhiga.